True Lies (1994) | MM Movie Store
Harry Tasker ဆိုတာက ခဈြဇနီး Helen ရဲ့ အိမျဦးနတျ …….သမီးလေး Dana ရဲ့ ခဈြဖဖေေ…ဝါရှငျတနျဒီစီ ရဲ့ တဈနရော ဆငျခွဖေုံးရပျကှကျမှာ နထေိုငျတဲ့ ကှနျပွူတာကုမ်ပဏီတဈခုမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့အရောငျးကိုယျစားလှယျတဈဦး…ဒါကတော့ လူတှသေိထားတဲ့ Harry Tasker အကွောငျးပါ…
အမှနျကတော့…. Harry ဟာ United State ကို ခွိမျးခွောကျလာတဲ့ အန်တရာယျတှကေို နှိမျနငျးပေးရတဲ့ လြို့ဝှကျအဖှဲ့အစညျးတဈခုရဲ့အေးဂငျြ့တဈဦးပါ…Harry ဟာ အေးဂငျြ့တဈဦးဖွဈနတေော့ ဇနီးကို ဂရုစိုကျခြိနျမရ… ဇနီးဖွဈသူ Helen ကလဲ ကွာတော့ အထီးကနျြပွီး Simon လို့ချေါတဲ့ ကားအရောငျးဝနျထမျးတဈဦးနဲ့ ပတျသကျပါတော့တယျ…
ဒါကို ရိပျမိတဲ့ Harry က ဇနီး နဲ့ ပတျသကျနတေဲ့ ယောကျြားကို စောငျ့ကွညျ့ဖို့ အဖှဲ့အစညျးရဲ့ လြို့ဝှကျကိရိယာကို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ… ဇနီးအပူမိနတေုနျးမှာဘဲ US ကို ခွိမျးခွောကျလာတဲ့ ပွဿ နာတဈခု ပျေါလာပါတော့တယျ… Abu Aziz ဆိုတဲ့ အကွမျးဖကျသမားဟာ Crimson Jihad လို့ချေါတဲ့ အကွမျးဖကျအဖှဲ့အစညျးတဈခုကို ဖှဲ့စညျးခဲ့ပါတယျ…
ဒီအဖှဲ့အစညျးဟာ US ကို သူတို့ လိုခငျြတာ မပေးရငျ အန်တရာယျပွုမယျဆိုပွီး ခြိနျးခွောကျလာပါတော့တယျကိုငျး ပွသနာအားလုံးကို အာနိုးကွီးဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကွညျ့လိုကျပါဦးအာနိုးကားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုငျးအမိုကျစားအကျရှငျခနျးတှကွေညျ့ရမှာဖွဈပါတယျ
Harry Tasker ဆိုတာက ချစ်ဇနီး Helen ရဲ့ အိမ်ဦးနတ် …….သမီးလေး Dana ရဲ့ ချစ်ဖေဖေ…ဝါရှင်တန်ဒီစီ ရဲ့ တစ်နေရာ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့ ကွန်ပြူတာကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး…ဒါကတော့ လူတွေသိထားတဲ့ Harry Tasker အကြောင်းပါ…
အမှန်ကတော့…. Harry ဟာ United State ကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ အန္တရာယ်တွေကို နှိမ်နင်းပေးရတဲ့ လျို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့အေးဂျင့်တစ်ဦးပါ…Harry ဟာ အေးဂျင့်တစ်ဦးဖြစ်နေတော့ ဇနီးကို ဂရုစိုက်ချိန်မရ… ဇနီးဖြစ်သူ Helen ကလဲ ကြာတော့ အထီးကျန်ပြီး Simon လို့ခေါ်တဲ့ ကားအရောင်းဝန်ထမ်းတစ်ဦးနဲ့ ပတ်သက်ပါတော့တယ်…
ဒါကို ရိပ်မိတဲ့ Harry က ဇနီး နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့ ယောကျာ်းကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လျို့ဝှက်ကိရိယာကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်… ဇနီးအပူမိနေတုန်းမှာဘဲ US ကို ခြိမ်းခြောက်လာတဲ့ ပြဿ နာတစ်ခု ပေါ်လာပါတော့တယ်… Abu Aziz ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားဟာ Crimson Jihad လို့ခေါ်တဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်…
ဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ US ကို သူတို့ လိုချင်တာ မပေးရင် အန္တရာယ်ပြုမယ်ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်လာပါတော့တယ်ကိုင်း ပြသနာအားလုံးကို အာနိုးကြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်လိုက်ပါဦးအာနိုးကားဆိုတော့ သိတဲ့အတိုင်းအမိုက်စားအက်ရှင်ခန်းတွေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Stranger (Season 2) ၊ အပိုငျး (၁၃)